Tanzaniana Mpamboly Ireo Olo-malaza Vaovaon’ny Televiziôna Mampiseho Ny Fiainana Andavan’andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2015 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, မြန်မာ, English
Ireo mpifaninana amin'ny “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo” an'ny Oxfam: Sven Torfinn ho an'ny Oxfam
Ito lahatsoratra ito sy ny tatitra amin'ny onjampeo nataon'i Marissa Lorusso ho an'ny The World dia niseho tamin'ny voalohany tao amin'ny PRI.org ny 22 Jolay 2015, ary naverina nalefa eto noho ny fifanarahana amin'ny fifampizaràna ny votoaty.
Milaza ny ankamaroan'ireo olona fa tsy toerana tsara fakàna maodely ny fandaharana mampiseho ny fiainana andavanandro amin'ny televiziôna. Fa any Tanzania kosa, izany mihitsy no tanjon'ilay fandaharana fampisehoana ny fiainana andavanandro nampitondraina ny anarana hoe “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo“.
Mankalaza vondrona vehivavy mpamboly izay miaraka miaina ao aminà tanàna kely iray ny “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo,” na Mama Shujaa wa Chakula araka ny ahafantarana azy any Tanzania. Fonenana naorina manokana ilay “tanàna kely” — izay nanaovana ny fanodinana ilay horonantsarinà fampisehoana ny fiainana andavanandro. Raketin'ireo mpamokatra ho anaty horonantsary ireo vehivavy mifampizara ireo fomba fambolena, sady nofaninana hànana ny fahaiza-mitarika sy ny fahaizana mitantana ny vola. Ny mpijery no mifidy ho ny asaniza no tiany indrindra, ary isaky ny dingana iray, misy mpandresy tsongaina amin'ny fitambaran'ireo safidy ireo sy ny an'ireo mpitsara.
Toy ny amin'ireo fampisehoana ny fiainana andavan'andro amin'ny fahitalavitra maro, mametraka fanamby ny “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo”. Amin'ity taona ity, miezaka ny mampiasa ireo zavatra hita eo an-toerana ireo mpandray anjara mba hamoronana fitaovana, manandrana fomba vaovao fahandroana sakafo, ary mandresy amin'ny fikarohana harena miafina. Milaza i Eluka Kibona, izay miasa amin'ilay fandaharana any Tanzania, hoe ireo mpifaninana dia “tsy maintsy mampiasa ny fahalalàny manokana avy eo an-toerana. Tsy maintsy mampiasa ny traikefany manokana izy ireo, tsy maintsy mampiasa izay niainany.” Tonga mitsidika ary miresaka momba ny zavatra rehetra ihany koa ireo manampahaizana avy any ivelany, manomboka amin'ny resaka fambolena ka hatramin'ny herisetra mifototra amin'ny firaisana sy ny fiovàn'ny toetrandro. Mitsidika ireo banky sy ireo orinasa fanodinana sakafo ihany koa ireo vehivavy mba hianatra bebe kokoa momba ny toekarena midadasika manodidina azy ireo.
Ny fitambaran'ireo “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo” an'ny Oxfam: Sven Torfinn ho an'ny Oxfam
Any Tanzania, mifatratra kokoa any amin'ireo mpamboly amin'ny faritra kely ny fahantrana, toy ireo vehivavy izay mifaninana ao anatin'ny “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo.” Miantehitra amin'ny vokatra voleny izy ireo mba hisakafoanany sy hisakafoanan'ireo fianakaviany, satria tsy ampy fotodrafitrasa sy famatsiam-bola ilainy mba hananany fiainana ampiampy kokoa ny ankamaroan'ireo mpamboly mahantra any Tanzania.
Ary mikapoka mafy ireo vehivavy Tanzaniana indrindra izany; araka ny Oxfam, vehivavy ny 75 isan-jaton'ny mpiasa amin'ny fambolena any amin'ny firenena, nefa tsy afaka mahazo findramam-bola izy ireo ary matetika aza tsy avela manana ny fanamarinan-taniny. Fanampin'izany, ratsy ny ankamaroan'ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ny vehivavy mpamboly. Tsy omen-danja ireo vehivavy, na mba ankasitrahana amin'ny zavatra entiny eo an-databatra akory.
Noho izany, nitsangana niasa ny Oxfam sy ny televiziôna Tanzaniana mpiara-miasa aminy, Maisha Plus, mba hanovàna ireo fomba fijery ireo, sy hanomezana hery ireo vehivavy mpamboly amin'ny alalan'ilay fandaharana. Hatry ny niantombohan'ny “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo” ny taona 2011, nahazo olona miisa 25 tapitrisa eo ho eo manerana ny firenena izy io. Avy tamin'ny nahalasa fampahafantarana sy kilalao momba azy ny ampahan'ny fahombiazan'ilay fandaharana. “Nieritreritra mafy ny amin'io zavatra io izahay: Ahoana no hanaovantsika io tsy ho kilalao fialamboly fotsiny fa sady fampianarana?” hoy i Kibona manazava. Milaza izy fa tiany ho tonga avy lavitra ireo mpijery ka “tsy hiresaka fotsiny momba ilay fampisehoana, fa hiresaka momba ny olann'ilay fampisehoana ihany koa.”
Taorian'ny nandefasana ampahany tao amin'ny televiziôna, natao afaka hita ao amin'ny Facebook sy YouTube izy ireo. Ary satria tsy manana fahitalavitra ny maro amin'ireo vahoaka any Tanzania, nividy fotoana tao aminà fandaharana amin'ny onjampeo teo an-toerana any Tanzania ny Oxfam mba handefasana endrika famintinana ireo dingana amin'ny alàlan'ny feo.
Mpifaninana amin'ny “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo” an'ny Oxfam: Sven Torfinn ho an'ny Oxfam
Mahazo loka avy amin'ny Oxfam ireo telo mpandresy. Miteny ho an'ny Oxfam i Kibona hoe “samy mpandresy daholo ireo rehetra mpandray anjara amin'ilay fampisehoana.” Kanefa fantany ihany koa fa ny hitadiavana ny tena lohany amin'ireo mpifaninana no ampahany amin'ilay fampisehoana. Amin'ity taona ity, eo anelanelan'ny 20 tapitrisa sy 25 tapitrisa schillings Tanzaniana (manodidina ny 9.000-11.000 dolara) ireo loka, amin'ny lafiny lelavola mivaingana sy fitaovana fambolena sy fanjonoana. Matetika ireo vehivavy ireo no manao izany ho fanampiana amin'ny fitondrana fitaovana sy fomba fambolena maoderina mankany amin'ireo tanànany sy ny vondrom-piarahamoniny. Misy vehivavy iray izao misolo tena ireo mpamboly eo amin'ny fari-piadidiany eo an-toerana, ary mizara amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy ny tirakitera azony tamin'ny loka. Ny iray hafa mampiasa ny famboleny mba hampiantranoana sy hanohanana ireo kamboty sy ankizy marefo.
Satria malaza be ilay fampisehoana, lasa olo-malaza eo an-toerana matetika ireo mpifaninana aorian'ny nilalaovany. Miverina mody izy ireny miaraka amin'ireo traikefa sy fahalalàny vaovao, ary matetika manampy amin'ny hampiharana ireo fomba fiasa vaovao ireo ho an'ireo vondrom-piarahamoniny. Milaza ny Oxfam fa nanomboka nampiditra politika vaovao ny governemantan'i Tanzania mikasika ny fampanofana tany, izay angamba mety vokatry ny laza be nentin'ilay fampisehoana .
Avy amin'ireo “Vehivavy Maherifon'ny Sakafo” an'ny Oxfam: Sven Torfinn ho an'ny Oxfam